Diamond vachikuya Plates
PCD Kukuya mavhiri
PCD Kukuya Plates
Iyo yepamusoro dhayamondi yevasungwa, hupenyu hwakareba uye inononoka kukuya kumhanya?
Kana tichiti ngoda yekukuya shangu yakanaka kana yakaipa, kazhinji tinofunga nezvekugaya kunyatsoita uye hupenyu hweshangu dzekukuya. Iyo yekukuya shangu chikamu inoumbwa nedhaimani nesimbi bond. Sezvo chikuru basa resimbi chisungo kubata dhayamondi. Saka, iyo diamond grit saizi uye kusangana ...
PCD DIAMOND ANOKUTSA MAGWERE
ne admin pane 21-08-24
PCD (polycrystalline diamond) inogadzirwa nedhaimani iyo inoshandiswa mune isiri-ferrous application, ine kuomarara kwepamusoro, yakasimba kutsemuka kwesimba uye yunifomu yezvivakwa, pamwe neakanakisa kupfeka kuramba uye kwakanyanya kupisa kupisa. PCD yepasi yekugedza maturusi akagadzirirwa kubvisa exploy, pendi ...
Mutengo wesilicon nitride iron poda yakakwira neanopfuura makumi maviri muzana gore-ne-gore
ne admin pane 21-08-14
Muna Nyamavhuvhu, iwo mutengo wakakura wesilicon nitride iron poda (Si: 48-52%, N: 30-33%, Fe: 13-15%), iwo wakanyanya mutengo wemusika waiva RMB8000-8300 / tonne, yaive RMB1000 / tonne yakakwira kupfuura pakutanga kwegore, kuwedzera kweinenge 15%, nepo mutengo wakakwira waipfuura 20% ...
Aluminium Yakavakirwa Dhaimondi Kukuya Mukombe Wheel
ne admin pane 21-07-29
Tsanangudzo: Dhayameter: 4 ″ / 100mm, 5 ″ / 125mm; Chikamu chakakwirira 8mm; M14 kana 5 / 8-11 Thread; Grit # 30, # 50, # 100. (Ndokumbirawo mubhadhare iyo 5 / 8-11 Thread Kazhinji inoshandiswa muNorth America Musika) Kunyorera: YeGranite, machena, kongiri, brock… .. Feature: 1. # 30 yedanho rekutanga c ...
10.5, Kurumidza Shandura Base Plate YeMatanhatu Masimbi Trapezoid Plates
Iyo Base Plate YeMetron Trapezoid - 270mm, matanhatu Bays chimwe chikamu cheiyo Iyo Fast Shanduko Sisitimu (FCS). Iyi iri nyore kushandisa magnetic SNAP-ON / SNAP-OFF sisitimu yekugaya madhaimani. Kamwe iyo Base Plate yaiswa, haifanirwe kumbobviswa. Inoratidzira Iyo Inokurumidza shanduko base base ndiro consis ...
Trapezoid diamond kongiri hasha chishandiso kukorobha padhi kukuya ndiro shangu
Dhayamondi Kukuya ndiro ndeimwe yakakurumbira pasi pekushandisa, iyo iri nyore shanduko dhizaini uye zvakanyanya chengetedza nguva yekuchinja iyo Kukuya Bhutsu. Hapana need screwdrivers uye bhaudhi, ingoigadzirisa neruoko. Iyo wedge dhizaini inogona kuita kuti yekukuya shangu ibatanidze muchina unamate zvakakwana. Mabond mhando mhando anotangira kubva extral s ...
Chii chinonzi kupfeka kwedhaimondi cheka musoro?
Iko kusakara kwedhaimani chishandiso kwakabatana zvakanyanya nemamiriro ayo akatakurwa, saka mamiriro ekugadzirisa anozokanganisa kupfeka, uye izvo zvemusoro wedhaimani zvinoita mutsauko mukuru. Kazhinji, zvirimo nedhaimani zvakaderera uye simba rekushandisa rakaderera, Zvisinei, kana iyo ...
Ndeipi nzira yechikamu chedhaimondi?
ne admin pane 21-07-01
1.Kudzvinyirira uye tembiricha ichikwira nhanho Panguva yekutsva kutsikirira sintering, kutanga iyo hupfu zvinhu kuti ive sintered inotsimbirirwa kune imwe saizi, ndokuti, panguva yekupisa yekumanikidza sintering, kumwe kumanikidza kunoiswa kune iyo hupfu zvinhu kutanga, uyezve iyo temprature inomutswa. Panguva ino ...
Dhayamondi Kukuya Chikamu neakasiyana girt uye mativi chimiro kana kutenderera chimiro, laser yakasungwa kana yakakwira frequency sirivheri yakasungwa pane kukuya yakafukidzwa neshanduko yakapfava, sikuruu yekukiya, redi kukiya, wozogadzira pafloor kukuya muchina, pasi grinder, pasi polisher, yekongiri pasi, ibwe pasi, terrazzo concre ...
NZIRA DZOKUSARUDZA DIAMOND KUTSVIRA BHUKU
ne admin pane 21-06-15
Madhayamondi ekukuya mavhiri ane zvikamu zvakasiyana, muviri wakakamurwa kuita yakaoma, yepakati, yakapfava zvichingodaro; Zviyo zvakakamurwa kuita zvakakora, zvepakati, zvakanaka, nezvimwewo. Saka vane hunhu hwakasiyana uye mashandisiro akasiyana. Kana isu sarudza nedhaimani kukuya vhiri, tinogona kusarudza kurudyi maererano neavo ...
DIAMOND AKAONA BLADE
Pane 3 siyana nedhaimani akaona mashizha: 1.Sintered nedhaimani saha chipasa: zvinosanganisira chando-kudzvanya sintering uye inopisa chakatsindirwa sintering, uye thenpressed uye sintered mu Kuumbwa. 2.Welded saw blade: inosanganisira brazing uye laser weldin ...
Diamond waya akaona:
1.Diamondi Wakaona YeKuware: Tinokurudzira tambo yerabha, inogona kuchengetedza tambo yesaha tambo zvakanaka uye kuwedzera simba redare. Irabha ine yakanaka kupisa tembiricha, uye inogona kushandiswa kana mvura isina kukwana. Kuchinja kwakasimba kunogona kudzora dambudziko rekucheka-mu-rimwe-divi 2.Diamond Wi ...
Kero:Kwete. 1719, Changjiang Road, Lianxi District, Jiujiang Guta, Jiangxi Province.